Olu suku kwimbali yokulwa - nge-14 kweyeNkanga - Wwe
Olu suku kwimbali yokulwa - nge-14 kweyeNkanga
Namhlanje, i-14thNgeyeNkanga lusuku olubalaseleyo kwimbali yokulwa. Ityala elidumileyo, uninzi lwezihloko ezithile ezingalibalekiyo, kunye nembeko yeenyembezi kwenye yezona zinto zidumileyo zexesha lethu zenzeke ngalo mhla kwiminyaka emininzi eyadlulayo.
Ke ngaphandle kokuqhubeka kokunye, nazi iinyani ezaziwayo malunga namhla ezinokuphazamisa ingqondo yakho:
# 1 Ithelevishini ye-in-ring ye-Kurt Angle-nge-14 ka-Novemba ye-1999 yeQonga lokuSinda
Ngo-Novemba ka-1999 wabona ii-vignettes zomoya ezikhuthaza ukufika kwe-1996 ye-Olimpiki yegolide ye-Olimpiki uKurt Angle kwinkampani. I-Angle yaqala ngo-14thNgo-Novemba ku-Series of Survivor Series i-PPV, ethatha uShawn Stasiak.
Nangona umdlalo we-Survivor Series yayingumdlalo wakhe wokuqala we-TV kunye nenkampani, u-Angle wayeqale ukubonakala kwinkampani ngo-Matshi 1999 kwicandelo kunye noTiger Ali Singh kwaye wayenomdlalo wakhe wokuqala we-WWE ngo-Epreli- umdlalo omnyama nxamnye noBrian Christopher.
I-Angle iya kuphumelela ngophawu lwayo lwentengiso i-Olimpiki Slam kwaye iqhubeke nomsebenzi ophumeleleyo weWWE, ukuphumelela ubuntshatsheli obukhoyo kwinkampani.
ukuba wenzeni xa uwedwa kwaye uyadika
sihlawula ngokokujonga ishedyuli ka-2017 nganye
isithandwa sam asichithi xesha nam
iimpawu zonxibelelwano lokomoya nomntu
kwenzeke ntoni kwiikhody cody
kutheni kubalulekile ukubonisa intlonipho